Moa ve ny reraka avy amin'ny fitaovam-pikarohana mikaroka ny tranonkalanao? & Ndash; Atsaharo ny famonoana!
Moa ve ny reraka avy amin'ny fitaovam-pikarohana mikaroka ny tranonkalanao? - Atsaharo ny famonoana!
Manova ny algorithm saika isan'andro ireo fitaovam-pikarohana ary tsy tsara ho an'ny webmasters sy bilaogera ireo fiovana ireo. Misy foana ny fahafahana handraràna ny tranonkalanao noho ny famolavolana politikan'ny fikarohana. Ankoatra izany, mety ho voakasika ny valin'ny fikarohana sy ny fitadiavam-batana azy manokana. Tsara ny manakatona vohikala maromaro ao amin'ny Google, Bing, ary ny valin'ny fikarohana Yahoo mba hahafahan'ireo pejin'ny tranonkala mora hita. Jason Adler, mpitantana ny Success Success of Semalt , dia milaza fa amim-pifaliana, misy fomba sasany hanakanana vohikala sasany amin'ny valin'ny fikarohana. Ny sasany amin'izy ireo dia nodinihina etsy ambany.
Mora tahaka ny ABC ny famoronana tranokala ho an'ny besinimaro ao amin'ny Google Chrome. Noho izany, tokony hametraka ny Google extension ianao; Rehefa tafapetraka izy dia ho hitanao ny safidy hanakana ireo tranonkala na URL izay manelingelina anao matetika ary manosika ny tranonao any amin'ny valin'ny fikarohana Google. Raha vantany vao voatsikao ny safidy Block, ireo tranonkala ireo dia hanjavona avy hatrany amin'ny valin'ny fikarohana Google. Tokony hotsaroanao fa ireo tranonkala ireo dia miseho ao amin'ny valin'ny Yahoo sy Bing, izay midika fa tsy afaka manakana azy ireo amin'ny fikarohana hafa ianao amin'ny fampiasana ity fomba ity.
2. Atsaharo ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana avy amin'ny fitaovam-pikarohana toy ny Google.com :(
Mora ny manakana ny mpampiantrano amin'izao fotoana izao amin'ny Google..fr. Raha nisokatra ny sehatra Google Chrome, dia azonao atao ny manakana ireo tranonkala mampiahiahy na olon-dehibe amin'ny fipihana ny bokotra BlockIt. Ary raha tsindrio amin'ny safidy Show, ireo tranonkala ihany no hiverina amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Raha te hahita ny lisitr'ireo tranonkala nosakananao vao haingana ianao, dia mila tsindrio fotsiny ao amin'ny sivana Blocklist ao amin'ny doka. Matetika izy io dia miseho amin'ny lokon'ny loko ary manana menaka tanana.
3. Web site map plugin:
Ankoatra ireo fomba roa ireo, ny Webspam Report plugin dia tsara ihany koa ny miaraka. Izany dia ahafahanao mitatitra ireo tranonkala mampiahiahy sy olon-dehibe ho toy ny spam. Raha ny marina, ny safidy mora indrindra sy tsara indrindra dia azonao atao tatitra amin'ny tranonkala sy bilaogy amin'ny fotoana mety. Raha toa ka alefa any amin'ny Google ny tatitra spam, ny motera fikarohana dia hanasazy sy hanakanana tranonkala iray avy amin'ny valiny.
Miaraka amin'ity fanitarana ity, dia azonao atao ny manakana ny vokatra tsy fantatra sy ahiahiana ao amin'ny motera Google. Mampalahelo fa ity plugin ity dia tsy miasa tsara amin'ny Safari sy ireo tranonkala hafa. Midika izany fa azonao ampiasaina izany raha tsy mijery ny tranonkala amin'ny Google Chrome ianao ary manana io safidy io ho safidy voalohany.
4. Ho an'ny mpampiasa Firefox:
Raha mpisera Firefox ianao, dia azo atao ny mametraka fanampim-pahefana hafa izay hanakana ireo tranonkala tsy fantatra amin'ny fikarohana. Ohatra, raha manana tranonkala WordPress ianao, dia afaka manamarina ny plugin iray izay manampy ny manakana ny tranonkala tsy fanta-daza amin'ny valin'ny fikarohana Firefox. Rehefa tafapetraka tanteraka ianao dia afaka manetsika ny plugin ary manakana na mamafa ireo tranonkala sy bilaogy izay tsy tianao haseho amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Ireo fomba rehetra ireo dia mora ny manara-maso sy mahomby amin'ny tranonkala rehetra, bilaogy, ary ny media sosialy rehetra Source .